မရင့်ကျက်တဲ့ Fandom တစ်ခုရဲ့ အမူအကျင့်တွေက ဘာတွေလဲ… ? | News Bar Myanmar
မရင့်ကျက်တဲ့ Fandom တစ်ခုရဲ့ အမူအကျင့်တွေက ဘာတွေလဲ… ?
၂၁ရာစုရဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရကို Kpop Industry ဆိုတာဟာ နိုင်ငံတကာ မှာပါတော်တော်ကို ထိုးဖောက်နိုင်လာခဲ့ပါပြီ။ Kpop ပရိတ်သတ်အများစုကလည်း အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ့် Idol ကိုအားပေးကြပုံကလည်း အပြိုင်အဆိုင်ပါပဲ။
သို့သော် သတိထားရမယ့် အချက်တစ်ချက်က မိမိရဲ့ Idol ကိုအားပေးတဲ့ပုံက မှန်ကန်ဖို့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Idol တွေဟာ ပရိတ်သတ်တွေဆီက ရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့ဒဏ်ကိုခံရပါတယ်။ Fandom တစ်ခုရင့်ကျက်တယ်၊ မရင့်ကျက်ဘူးဆိုတာကို နောက်ဆုံးတော့ Idol တွေကိုပဲ ဦးတည်ပြီးပြောဆိုကြလို့ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့အမူအကျင့်၊ အပြောအဆို တို့ကြောင့်လည်း မိမိရဲ့ Idol တွေထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အတိတ်မှာလည်း ပရိတ်သတ်အချို့ကြောင့် အများပြည်သူကို တောင်းပန်းခဲ့ရတဲ့ Idol တွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အချက်တွေကတော့ မရင်ကျက်တဲ့ ပရိတ်သတ်အချို့ရဲ့ လုပ်ရပ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာ တစ်စုံတစ်ဦး (သို့) Fandom တစ်ခုကို ရည်ညွှန်းပြီးရေးသားထားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ဦးစွာပထမ အသိပေးပါရစေ။
1.Boycotting Others Group
ဒါကတော့ ကိုယ်ရဲ့ Idol နဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အခြား group တွေကို ပေါ်တင်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။ ဥပမာ.. ပြိုင်ဘက် Idol group တစ်ခုက Stage ပေါ်မှာဖျော်ဖြေနေတယ်ဆိုရင် Stage ရဲ့အောက်ကနေ “ညံ့လိုက်တာ၊ stage ပေါ်ကဆင်းသွား၊ ဘယ်သူ့ကိုပဲ ဖျော်ဖြေခိုင်း” စသည့်ဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားအဖွဲ့ performance လုပ်နေချိန်မှာ မိမိအားပေးတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့နာမည်တွေကို အကျယ်ကြီးအော်တာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တဖက်လူအပေါ်လုံးဝလေးစားမှု မရှိဘူးဆိုတာကို ပြသနေပါတယ်။ ကိုယ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ Idol ကိုချစ်တတ်သလို အခြားသူတွေလည်း ကိုယ့်လိုပဲ ချစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သတိထားရပါမယ်။
2.Disapproving Idols to get married or date
ဒါကတော့ Fandom တော်တော်များများမှာ တွေ့ရတဲ့အမူအကျင့်လေးပါ။ ကိုယ်အားပေးလာတဲ့ Idol တစ်ဦးက လက်ထပ်တော့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူရသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းနှင့်အများတော့ ဝမ်းနည်းကြမယ်ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါကဖြစ်လည်းဖြစ်သင့်တဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုပါ။
သို့သော် အချို့ပရိတ်တွေက Dating သတင်းတစ်ခု ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့် Idol ရဲ့ပါတနာ (သို့မဟုတ်) တခါတရံ Idol ကိုပါ bash လုပ်ကြတော့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ နားလည်ထားရမှာက Idol ဆိုတာကိုယ်ပိုင်တဲ့အရုပ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့မှာလည်း သူ့ဘဝနှင့်သူ ရှိပြီးသားပါ။
လူတိုင်းမှာကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ Idol တွေမှာလည်း သူတို့ဘဝကိုသူတို့ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ်အားပေးတဲ့သူကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပေးပြီး၊ သူ့ရဲ့အရာအားလုံးကို support ပေးနိုင်ဖို့ပါပဲ။ ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ ချစ်တော့ချစ်ပါ၊ စည်းတစ်ခုတော့ မကျော်စေနဲ့ ဆိုတာမျိုးကိုပြောချင်တာပါ။
3.Spreading Malicious Rumors
သတင်းမှားဖြန့်ခြင်းကို ပြောရပါမယ်။ မိမိအားပေးတဲ့ group မဟုတ်တဲ့အတွက် မကောင်းသတင်းတွေ ဖြန့်တာမျိုးကို ပြောချင်တာပါ။ ဥပမာ- ဆေးမသုံးပဲနှင့် ဆေးသုံးတယ်ဆိုပြီး သတင်းဖြန့်တာမျိုး..မိန်းမကိစ္စလိုက်စားတယ်၊ ကလေးရှိနေပြီ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးပါပဲ။
ဒါကိုဆန်းစစ် ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အချို့တွေက ကိုယ်ရဲ့ Bias group မဟုတ်တဲ့အတွက် သက်သက်ချည်းကို တိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တခါတလေဆို Idol တွေခမျာ သတင်းမှားတွေကြောင့် အများကြီးနစ်နာသွားရတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မိမိအားမပေးတိုင်း အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတော့ မတိုက်ခိုက်သင့်ပါဘူး။ ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ လူကျင့်ဝတ်ထဲမှာ ပါမနေပါဘူး။
4.Throwing hateful comments
ဒီအချက်ကတော့ Idol အတော်များများ ကြုံတွေ့ဖူးပါတယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ သိန်းပေါင်း၊သန်းပေါင်းချီနေတဲ့ကြားမှာ negative ကွန်မန့်တွေကတော့ ပါနေစမြဲပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မန့်လိုက်တဲ့ စာတစ်ကြောင်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ ခရီးရောက်သွားနိုင်လဲဆိုတာကို စဉ်းစားတဲ့သူကတော့ လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ Comments တွေကနေ လူ့အသက်တစ်ချောင်းတောင် နှုတ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။
ပြောတဲ့သူဘက်ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ် ပြောလိုက်ပင်မဲ့၊ အပြောခံလိုက်ရသူအဖို့ တသက်လုံးဒဏ်ရာ ဖြစ်သွားတာပါ။ ဥပမာ..ပြိုင်ဘက် group ကအဖွဲ့ဝင်ကို body shaming၊ ဒါမှမဟုတ် အမုန်းစကားတစ်ခုခု ပြောလိုက်တာမျိုး။
တဖက်လူထိခိုက် နစ်နာသွားအောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဝေဖန်လိုက်တာမျိုးတွေ တွေ့နေရတတ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့keyboard အောက်မှာ သူတစ်ပါးအသက်မဆုံးရှုံးသွားပါစေနဲ့။ တောင်ကိုရီးယားမှာလည်း အဲ့လို hateful comments တွေကြောင့် အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း ရှိခဲ့တာကို အားလုံးသိကြမှာပါ။
5.Invading Idols’ privacy or stalking
သူတို့တွေကို sasaengs fan တွေလို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ Idol ကိုအချစ်လွန်ပြီး သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကိုပါ လိုက်နှောက်ယှက်တတ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောတာပါ။ Idol နေတဲ့အိမ်၊ သွားသည့်နေရာတွေကိုပါ တောက်လျှောက်နောက်ယောင်ခံလိုက်ပြီး သူတစ်ပါးရဲ့ privacy ကိုချိုးဖောက်တတ်တဲ့ Fan အမျိုးအစားပါ။
အမှန်တကယ်တော့ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ Idol ကိုချစ်လို့လုပ်တာထက်၊ မိမိကိုယ်ကိုပိုချစ်လို့ လုပ်တဲ့အမူအကျင့်တစ်ခုပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပြည့်ဝဖို့ကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ပြီး အခြားသူရဲ့သဘောထားတွေကို လုံးဝကိုဂရုမစိုက်တာပါ။ အတိတ်မှာလည်း Sasaengs fan တွေကြောင့် အသက်အန္တရယ်နှင့်နီးခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်များလည်း ဒုနှင့်ဒေးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့လုပ်ရပ်မှန်ရဲ့လားဆိုတာကို ပြန်စီစစ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ့ကို အစွမ်းကုန်အားပေးချင်တာဟာ fan တိုင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ အားပေးပုံ၊ အားပေးနည်း မှန်ကန်ဖို့လို့အပ်ပါတယ်။ Idol တွေမှာလည်း သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေ၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရှိတာဆိုတာကိုလည်း နားလည်ရပါမယ်။ အားလုံးလည်း ကိုယ်ချစ်တဲ့ Idol ကိုနည်းစနစ်မှန်မှန်နှင့် Support ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း ဆောင်းပါးကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
Next BLACKPINK အတွက် ဂုဏ်ယူစကားပြောလိုက်တဲ့ Pussycat Dolls »
Previous « July လရဲ့ပထမပတ်အတွက် most buzzworthy ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများ